Google choro ka ndi mmepe ngwa tinyekwuo ego | Gam akporosis
Google ga - enye ndị mmepe ngwa ọnụọgụ ego dị elu
Google na-achọ ụzọ maka ndị mmepe ngwa iji hụ Playlọ Ahịa Google Play dị ka njedebe ikpeazụ maka ọrụ ha nweta mma ego. Ọ naghị adị mfe maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị okike ngwa itinye ego na ngwa ha, yabụ ndị nke Mountain View na-aga n'ihu na-echepụta ma na-atụpụta usoro ọhụrụ ka ọ dịrị ọtụtụ ndị na-enye nsogbu na epic nke pụtara ịmalite ngwa na ụlọ ahịa a. , ma ọ dịkarịa ala uru.
Dị ka anyị mụtara taa, Google na-ewebata usoro ịkekọrịta ego ọhụrụ ga-enye ndị mmepe ngwa pasent dị elu. Ihe dị na Apple ga-achọ ndị mmepe na-ebupụta ngwa na Storelọ Ahịa App. Dị ka ndị nọ na Cupertino, atụmatụ G buru ibu bụ ịbawanye ego ndị mmepe gam akporo natara site na 70 pasent na 85 pasent nke ego niile sitere na ndenye aha.
Ma ọ bụ ọbụna Onyinye Google na-ada ka mma karịa nke ndị okike nke iPhone, n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndị nkwusa ngwa ngwa pasent 85 nke ego ndị debanyere aha ha niile, ọ bụghị naanị ndị na-akwụ ụgwọ maka ndenye aha ọnwa 12.
Isi mmalite nke akụkọ ahụ ekwuola na Mountain View malitere site na amụma nke ụdị ọhụụ a na ụlọ ọrụ ntụrụndụ, ọkachasị ndị metụtara ọrụ vidiyo, otu afọ gara aga. Otu ebumnuche nke usoro ọhụrụ a bụ iji dọta ụlọ ọrụ ndị a na ndakọrịta nke Chromecast.
Otu osila dị, anyị enweghị ozi gbasara mgbe usoro ohuru a ga - adi maka ndị mmepe ọ bụla nke atọ, mana ọbụlagodi na anyị nwere ike ịma na Google na-etinye anụ niile na anụ ahụ ka ha wee nweta ego karịa na anyị na-akwụkwa pasent dị elu na ndị mepụtara ngwa ndị ahụ anyị na-ejikarị eme ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga - enye ndị mmepe ngwa ọnụọgụ ego dị elu
Paranoid gam akporo laghachi na esemokwu na mbipute 6.0